बिशाल अधिकारी आशुतोष
चिन्दै छु यहाँ कसले कलम बेचेको छ ।
घाउ पार्दै अस्पतालले मलम बेचेको छ ।
बारबार देशको मुहार फेर्छु भन्नेले नै,
परिवारै लत्याएर घर्जम बेचेको छ ।
पिडितलाई पीडा थपि निर्दोषलाई पक्रिएर
काधे फुलि लाउने दाईले सलाम बेचेको छ ।
सुनकोशिको बगरसंग आस्था साटेपछि
बहानामा खानी अनि फलाम बेचेको छ ।
म पुजारी, हिन्दुबादी भन्नेहरुले नै
गजुर मुर्ती अधिकतम बेचेको छ
हेटौंडा १४ मयुरधाप
This entry was posted in गजल and tagged Aashutosh, Adhikari, Bishal, Pallawa, पल्लव, बिशाल अधिकारी आशुतोष. Bookmark the permalink.
अनिश न्यौपाने “मनको आँखा” का जोर गजल →